ဗွီဒီယိုကို MP4 သို့ DVD နှင့် DVD သို့ MP4 သို့ Emulator.online သို့ပြောင်းပါ
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းအသုံးပြုသူအမြောက်အများသည်စီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင်ဒီဗီဒီများသို့မဟုတ်အိမ်လုပ်စီဒီများစုဆောင်းထားကြသည်။ ၎င်းကိုအထူးကစားစက်ဖြင့်ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်။ သက်တောင့်သက်သာကြည့်နိုင်သည်။ နောက်နှစ်များ၌ streaming ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ခရီးဆောင်ပလက်ဖောင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းသည်ဤအလေ့အကျင့်ကိုများစွာလျော့နည်းစေသဖြင့်အချို့သောအံဆွဲများ၌ဖုန်များစုဆောင်းနေသောဒီဗီဒီများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့လိုချင်ရင် ဒီဗီဒီတွင်ပါသောဗွီဒီယိုများကိုဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်သိုမဟုတ်အပြန်အလှန်သိမ်းဆည်းပါ (MP4 DVD ကိုယူဆောင်လာပါ) ဤလမ်းညွှန်တွင်ဤလိုအပ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည် optical discs များ၏ပါဝင်မှုနှင့်မည်သည့်အရာကိုသိမ်းဆည်းရမည်၊ မည်သည့်အရာများကိုဖယ်ရှားရမည်ကိုသင်အများဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: ဘယ်လို ဗွီဒီယိုနှင့်ဒီဗွီဒီများကို MP4 သို့ MKV သို့ PC နှင့် Mac တို့သို့ပြောင်းပါ
DVD ဗွီဒီယိုများကို MP4 သို့ပြောင်းလဲနည်း (နှင့်အပြန်အလှန်)
အောက်ဖော်ပြပါအခန်းများတွင် DVD ဗွီဒီယို optical discs များကို MP4 ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခမဲ့ပရိုဂရမ်များကိုပြပါလိမ့်မည် (ထို့နောက် MP4 တစ်ခုမှတစ်ခုထက်ပိုသော DVD ဗွီဒီယိုများဖန်တီးပါ) ။ ပရိုဂရမ်များအားလုံးလုပ်ရန်ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဒီဗီဒီအရွယ်အစားကိုအချိန်ကန့်သတ်ချက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကြီးပြီးခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သောပရိုဂရမ်များ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
DVD ကို MP4 သို့ပြောင်းရန်အစီအစဉ်များ
ဒီဂျစ်တယ်ဒီဗီဒီကူးပြောင်းခြင်းကိုကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပထမဆုံးအစီအစဉ်မှာ HandBrake ဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်၊ DVD ကိုပထမဆုံးဖွင့်စက်ထဲသို့သွင်းပါ၊ ၂ မိနစ်စောင့်ပါ၊ ထို့နောက်ပရိုဂရမ်ကိုစတင်ပါ၊ ဗွီဒီယိုကိုတင်ရန်ဒီဗီဒီဖွင့်စက်ကိုရွေးပါ။
ဗွီဒီယိုကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တင်ပြီးသည်နှင့်မည်သည့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံလမ်းကြောင်းများကိုသိမ်းဆည်းမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးသည် ပုံစံ ပုံစံ MP4ကျနော်တို့အဖြစ်တည်ထောင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည် အသံ 576p25 ထို့နောက်ငါတို့တက်နှိပ် coding ကိုစတင်ပါ.
HandBrake အတွက်ခိုင်လုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် VidCoder ပရိုဂရမ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းသော interface တစ်ခုတွင်မည်သည့် DVD ဗီဒီယိုကိုမဆိုထည့်နိုင်သည်၊ မည်သည့်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းထားမည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ စာတန်းထိုးများထည့်သွင်းရန်၊ ပြောင်းလဲရန်ပရိုဖိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ encoding settings ကိုs) နောက်ဆုံးတွင် MP4 ဖိုင်သို့နှိပ်ခြင်းဖြင့် disk ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည် ပွောငျး.
MP4 ဖိုင်များအစား DVD ဗွီဒီယိုကို MKV (အသစ်ပုံစံနှင့် Smart TV နှင့်သဟဇာတ) တွင်သိမ်းဆည်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် MakeMKV ကဲ့သို့အခမဲ့ထိရောက်သည့်ကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီဗီဒီကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အလွယ်ကူဆုံးပရိုဂရမ်မရှိပါ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါ၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးမည့် optical disk ကိုရွေးရန်သိမ်းဆည်းရန်ပုဒ်များကိုရွေးပါ၊ ဖိုင်အသစ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါ။ MKV လုပ်ပါ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေရန်။
သင်သည်လက် ခံရ၍ HandBrake နှင့် VidCoder ကိုမသုံးနိုင်ပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ထားသော DVD ကိုပြောင်းပါ
အထက်တွင်အကြံပြုထားသည့်ပထမဆုံး DVD နှစ်ခုအားကာကွယ်ထားသည့် DVD ဖြင့်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါက MP4 သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ စျေးကွက်ထဲရှိမူရင်းမီဒီယာထဲသို့ကူးယူထားသော anti-copy ကာကွယ်မှုများ။ ကာကွယ်မှုများကိုဖယ်ရှားသည့်စနစ်တစ်ခုတည်းတွင်တစ်ခုမှာ MakeMKV ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်တွေ့ရသောပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် ကွန်ပြူတာသို့ DVD (rip) ကူးယူရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ.
NOTAပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ္တူများပြုလုပ်ရန်ကာကွယ်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုမဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာမိတ္တူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှမည်သည့်အခါမျှစွန့်ခွာသွားခြင်း (ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဝေ။ ရောင်းချခြင်းမပြုနိုင်) ။
MP4 ကို DVD သို့ပြောင်းရန်အစီအစဉ်များ
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ MP4 ကို DVD Video သို့သယ်ဆောင်ရန်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုအပ်လျှင် (ထို့ကြောင့် desktop DVD player များနှင့်သဟဇာတ)၊ Freemake Video Converter ကိုချက်ချင်းကြိုးစားရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်၊ DVD အလွတ်တစ်ခုကိုအသံဖမ်းစက်ထဲသို့ထည့်ပါ၊ အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါ၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဗီဒီယိုက အပေါ်ညာဘက်ရှိ MP4 file မ်ားကို select လုပ်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ DVD ကိုပေါ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အတည်ပြုပါ မီးလောင်။ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုတည်း၌ပင်လျှင်အခြေခံအချက်အလက်များသည် DVD ဗွီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်လုံလောက်မှုထက်ပိုသော်ငြားလည်း DVD menu နှင့်ပြောင်းလဲခြင်း၏အရည်အသွေးကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
MP4 ကို DVD သို့ပြောင်းရန်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်မှာ AVStoDVD ဖြစ်သည်။
ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ MP4 ဗီဒီယိုတွေကို DVD Video နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ format တစ်ခုအဖြစ်မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် optical disc ကိုချက်ချင်းမီးရှို့ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုများထပ်ထည့်ရန်ကိုနှိပ်ပါ ဖွင့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ စတယ်.
MP4 DVD ကိုယူဆောင်လာရန်နှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက DVD Author Plus အားစမ်းကြည့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၎င်းနှင့်အတူ၊ MP4 ဖိုင်များအားလုံးကို built-in folder tree မှချက်ချင်း load လုပ်နိုင်သည်၊ နောက်ဆုံး optical disc ဖန်တီးခြင်းပြီးမြောက်ရန် file manager ကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲချက်ချင်းတင်နိုင်သည်။ ငါတို့ဘယ်တော့လဲ ကွက်ကို အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံပြီ။ DVD parameters ကို ၀ င်းဒိုး၏ညာဘက်အပိုင်းတွင်ထားပါ။ ထိပ်ဘက်ရှိ Next ကိုနှိပ်ပါ။
MP4 ကို DVD သို့ပြောင်းရန်အခြားအသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုပါ လမ်းညွှန် MKV ကို AVI သို့ပြောင်းပါသို့မဟုတ် MKV ကို DVD သို့ကူးပါ.
အထက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ wear and tear movies များ၏ optical discs များကိုကယ်တင်ရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုဆွေမျိုးများအားပေးအပ်ရန်သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရန်အတွက်ဒီဗီဒီများ ဖန်တီး၍ MP4 မှ DVD သို့ DVD မှ MP4 သို့ပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်သည်။ DVD player အဟောင်း၏အလုပ်လုပ်ပုံ
အခြားလမ်းညွှန်တစ်ခုတွင်အခြားအစီအစဉ်များကိုသင်ပြသခဲ့သည် iPhone တွင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန် DVD ကို MP4 သို့ပြောင်းပါ, ဒါကြောင့်ဗွီဒီယိုများ (DVD မှ) သည် iPhone ပေါ်ရှိ built-in ပလေယာနှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်။
အကယ်၍ ဗွီဒီယိုများကို Android တွင်ကြည့်ရှုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်သို့သွားပါ စမတ်ဖုန်းတွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုပြောင်းပါ.